दुई मिलियन डलर भन्दा बढीको अर्डर
समय: 2019-12-13 दृश्य:
भर्खर, विदेशी अर्डर उत्पादनहरू उत्पादन गरेपछि ग्राहकहरू हाम्रो कारखानामा निरीक्षणको लागि आए। यो अर्डर रकम दुई मिलियन डलर भन्दा बढी थियो. यस क्रममा, हामी ग्राहकहरु मा आधारित सूत्र अनुकूलित ' माग र उत्पादनहरु लाई उत्पादन गर्‍यो.
हाम्रो आर&डी केन्द्र:
चीनमा हुनानको सबैभन्दा ठूलो औषधि नवीनता र अनुसन्धान संस्था.
HPLC संग सुसज्जित, एक्सपीआरडी, र अन्य उच्च-अन्त विश्लेषण र परीक्षण उपकरणहरू र स्वचालित प्रतिक्रिया उपकरण योग्य लाखौं RMB.
धेरै 50 कर्मचारी, जस बीच आर&D स्टाफ भन्दा बढीको लागि खाताहरू 80%.
आर&डी फिल्डहरूमा एन्टी-ट्यूमर समावेश छ, प्रोस्टेट रोग, अर्थोपेडिक रोग आदि.
हाम्रो उत्पादन आधार:
Xiangyin काउन्टी औद्योगिक पार्क मा स्थित छ, युएयांग, हुनान
हुनान प्रान्तमा सबै भन्दा ठूलो स्वास्थ्य खाना GMP प्रमाणित उद्यम, भन्दा बढिको एक विशेष उत्पादन र भण्डारण आधारको साथ 30,000 वर्ग मीटर.
लाईफलाइनको रूपमा उत्पाद गुणलाई आदर गर्दछ.
हाम्रो कम्पनी, मेडोनकेयर, एक GMP चीनमा प्रमाणित फार्मास्यूटिकल कम्पनी, अनुसन्धानमा केन्द्रित छ, विकास गर्दै, प्रोस्टेट र मेरुदण्ड रोगहरुमा जडिबुटी उत्पादनहरु। हाम्रो कम्पनी मा डीलर संग सहयोग निर्माण गरेको छ धेरै देशहरु। हाम्रो कम्पनी विश्व भर मा अधिक र अधिक भरपर्दो डीलरहरु संग सहयोग को लागी आशा गर्दछ।
अघिल्लोमेडोनकेयर 9th औं वार्षिकोत्सव समारोह
अर्कोप्रस्ट्याटिन्डि U अन्वेषण